U Ganacso Isbadel
Ramadan waa bisha soonka, salaada, astaanta, bulshada iyo waxsiinta dadka baahan.
Sidaas darteed, bishan waxaynu u ganacsaneynaa isbadel wanaagsan.
Waxaanu rajeynaynaa inaan siino 1000 cuntooyin ah dadka baahan.
Waana markaad muhiimka tahay markani
Ganacso oo naga caawi inaan gaadhno 1000!
Talaabooyin yar ayaa sameeya isbadel weyn.
GANACSO SI AAD UGU DEEQDID